Red Edition နဲ့ iPhone X ကို မြင်တွေ့ချင်ကြလား ? – AsiaApps
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကလည်း Blush Gold Edition iPhone X ရဲ့ rumor လေးတစ်ခုကိုအားလုံးပဲသိပြီးလောက်မှာပါ။ (Asiaapps ကိုဝင်ကြည့်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့.. အယ်လယ် ?)။ အခုလည်းထိုနည်းတူ iPhone X ရဲ့နောက်ထပ် Rumor လေးတစ်ခုထပ်မံထွက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။ Red Edition iPhone X ထွက်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ Rumor ပါ။ Martin Hajek youTube channel ကနေတဆင့် ပေါက်ကြားလာတဲ့ Rumor တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ Apple ဟာ iPhone X ရဲ့ Color option အသစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘာကိုမှတိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Space Gray နဲ့ Silver color ပြီးရင်နောက်ထပ်ရောက်ရှိလာမယ့် color option က Blush Gold ဖြစ်မလား (သို့) Red ဖြစ်မလား ဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ဆိုရင် Blush Gold ထက် Red edition ကိုပိုပြီးထွက်စေချင်တယ်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Blush Gold ကာလာကမှိန်ပြီး စွဲဆောင်မှုနည်းတယ်လို့ယူဆရလို့ပါ ?)
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရော Red edition လား (သို့) Blush Gold edition ကိုထွက်စေချင်လား ? အမြင်လေးတွေကို ကွန့်မန်မှာချန်ထားခဲ့ပါဉီး ?)
Rumor image of iPhone X (Red Edition)
Apple, New Edition, Rumors